Puntland Oo Amartay In la Toogto Ganacsatada Lacagta Siisa Alshabaab AwdalMedia Awdalmedia Puntland Oo Amartay In la Toogto Ganacsatada Lacagta Siisa Alshabaab
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo booqasho ku jooga Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, isaga oo kala hadlay dardar gelinta howlaha sugida Amniga iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish.
Taliska Booliska Gobolka Bari & Guddoomiyaha Gobolka Mudug ayaa kulankooda waxaa ay isku afgarteen nay siwadajir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab iyo Daacish oo weeraro kala duwan ka geysta degaannada Puntland.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa Ganacsatada Puntland u soo jeediyay in aysan Al-Shabaab siinin lacago baad ah oo uu sheegay in dadkooda lagu dhibateeynayo.
Waxaa uu sheegay in Ganacsatada, iyaga oo doonaya inay naftooda badbaadiyaan ay Al-Shabaab siiyaan lacag, balse dadkoodii lagu dilay ayna kamid yihiin dadka wax dilaayo maadaama ay lacag siiyaan Al-Shabaab, waxana uu ugu baqay inay diidaan lacagaha ay siiyaan Al-Shabaab.
“ Al-Shabaab laba meel ayay lacag badan ka helaan waa Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee muqdisho iyo kuwa Magaalada Boosaas, waa in Ganacsatada ay si deg deg ah u diidaan lacagtaas oo ay shiraan una midoobaan arrintaas ayuu yiri” Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa soo jeediyay in ganacsadihii la ogaado in uu Al-Shabaab siiyo lacag uu mudan yahay in bartiisa lagu toogto ama la Maxkamadeeyo.